Ukwaziswa kokuqatshelwa kobuso kwiKhamera eziLawula uMzimba | Izisombululo ze-OMG
Ukwaziswa kokuqatshelwa kobuso kwiikhamera ezizezomzimba
Ukuqatshelwa kobuso sisoftware yesicelo se-biometric esikwaziyo ukuchonga ngokukodwa okanye ukungqinisisa umntu ngokuthelekisa kunye nokuhlalutya iipateni ngokusekwe kubuso bomntu. Ukuqwalaselwa kobuso kusetyenziselwa iinjongo zokhuseleko, kodwa kuyanceda ekufumaneni abantu abalahlekileyo. Ngapha koko, itekhnoloji yokwamkelwa kobuso ifumene ingqalelo ebonakalayo njengoko inokubakho kuluhlu olubanzi lwezicelo ezinxulumene nokunyanzeliswa komthetho kunye namanye amashishini.
Iikhamera zokhuseleko zokuqaphela ubuso zinokukhumbula ubuso babantu abanomdla, uthungelwano lwamalungu eqela lemigulukudu, abafuna ulwaphulo-mthetho kunye nabarhanelwa kulwaphulo-mthetho. Esi sixhobo silumkisa abanini beshishini xa abantu abangafanelekanga bafike kwipropathi yabo.
Usebenza njani wolwamkelo lobuso
Phakathi kwenkxalabo malunga nokuba ngasese kunye nokuchaneka, kubalulekile ukuqonda ukuba ukusebenza kobuso kusebenza njani. Ukuqwalaselwa kobuso kuxhomekeke kubuchwephesha obuninzi ukuze busebenze: Inkqubo yokubamba umfanekiso (ikhamera okanye ukujonga ividiyo), ubukrelekrele bokufunda kunye nokufunda ngomatshini. Imephu yobuso eyaziwayo yobuso kwifoto okanye ividiyo kwaye uyiguqulela kwidatha yebhayometri yedijithali. Ithelekisa lo tyikityo lwedijithali kwiziko ledatha lobuso obaziwayo ukufumana umdlalo.
Kukho amanyathelo amane asisiseko sokwamkelwa kobuso:
Inkqubo ibamba umfanekiso wobuso bakho njengoko uhamba ngendlela. Oku kunokuba ngumfanekiso wevidiyo okanye ifoto.
Isoftware eyamkelayo yobuso ifunda ijiyometri yobuso bakho. Ijonga izinto ezinje ngomgama phakathi kwamehlo akho, ibunzi ukuya kubude be-chin, kunye nokuphawulwa kobuso ebusweni ukuphucula isiginesha yobuso bedijithali.
Ukutyikitya kobuso bakho, ifomula yemathematics kunye neeser eyingqayizivele kuwe, emva koko kuthelekiswa nedatha yobuso eyaziwayo.
Inkqubo imisela isazisi sakho.
Uyisebenzisa phi into yokwamkelwa kobuuso?
Izikhululo zeenqwelomoya yenye yezona ndawo zinabantu. Inani elandayo labantu likwandisa umngcipheko weengxaki zokhuseleko. Nangona izikhululo zeenqwelo moya zinezixhobo zokujonga, iikhamera zeCCTV, kunye nezinye iinkqubo zokhuseleko, kukho ukuvuza okukhuselekileyo. Ngokuhanjiswa kwetekhnoloji yokuqonda ubuso, ukhuseleko kwisikhululo senqwelomoya lungaphuculwa. Iikhamera zifakelwe ngaphakathi kwiibhasi zedolophu, iibhasi zesikolo, iibhasi zikawonke-wonke, iizikethi, iikeyile, kunye noololiwe ukujonga ubuso babakhweli kunye nokuthelekisa kwindawo yogcino lwemifanekiso. Ukuba kukho ubukho bomntu obufunayo, umqhubi kunye nabaphathi abachaphazelekayo bayaziswa.
Ukuqatshelwa kobuso kwakusenziwa okokuqala ukuze kuqinisekiswe isazisi kunye nokulawula ukufikelela, ukusebenza kwiimeko ezilawulwayo kunye nokuqinisekisa ukuba umntu ungubani na. Ngoku iikhamera zijonga izihlwele, zithelekisa bonke ubuso obudlulayo kuluhlu lokubukela.
Iiarhente ezininzi zokunyanzeliswa komthetho zisebenzisa ukubonwa kobuso ukuhlalutya ividiyo, ukugcina ixesha kunye nomzamo, kunzima kakhulu ukuyisebenzisa ngexesha lokwenyani, kwilizwe lokwenyani. Imathematics yokujonga wonke umntu odlulayo kwindawo enabantu abaninzi ngokuchasene noludwe oluncinci lwewotshi inyanzela ukwamkelwa kobuso kwimida yayo. Kuphela yi "Mini WIFI / GPS / 3G / 4G Umzimba-Worn Camera-Ukwamkelwa ebusweni (BWC058-4G)Ndiyakwazi ukunyamezela.
Ngokuchasene nokwamkelwa kobuso, iiccams zomzimba sele zikubonile ukwamkelwa kobuninzi. Ezi zixhobo zevidiyo zinxibe umzimba ngoku zifaka iyunifomu yamapolisa kwihlabathi liphela, zibonelela ngolawulo lobungqina, ukhuseleko lwamagosa, kunye nokuqinisekiswa koluntu. Iimbaleki zomzimba zirekhoda i-footage yokulayita ngokomzimba Ezinye iizimba zomzimba ziphinda zijikeleze ividiyo ibuyela umva kumagumbi okulawula. Abanye banxibelelana nezixhobo eziphezulu ukuze zibangele ukurekhodwa kwevidiyo. Njengoko izixhobo ezishukumayo ziyavela, iintlobo ezintsha zeemizimba esekwe kumaqonga e-smartphone asethelwe ukuba zibe namandla ngakumbi. Oku kuthetha ukuba ezi teknoloji zimbini ziya kuhlangana. Ukuqwalaselwa kobuso kumzimba wesidumbu inyathelo elilandelayo elilandelayo. Ukuxhobisa amagosa anoluhlu lweewashi ezifunekayo, abantu abanomdla, abantwana abalahlekileyo, abantu abadala abasesichengeni.
Ukusetyenziswa kwembonakalo yobuso kwimizimba enika ukhuselo kwizityholo zobuhlanga. Imigaqo-nkqubo isenokubekwa ekuthinteleni amagosa akhangele angakhonjwa ngobuso, nokuba athe amiswa. Apho kwenziwa isimangalo sokuba ukumisa kukhangele ulwaphulo-mthetho olukumgangatho ophantsi kwiindawo ezithile, kulwaziso lobuso kumzimba imizimba lubonelela ngokulinganayo. Olu hlobo lokukhusela luya kunceda ukukhawulezisa ukwamkelwa komntwana ngokubanzi.
Ukuqwalaselwa kobuso kwii-bodycams kuya kubonelela ngokuqinisekiswa okwinqanaba lesibini kwimidlalo evela kwizithuthi zokujonga kunye neekhamera ze-CCTV. Emva komdlalo wokuqala, igosa elime ngeenyawo lisondela kuloo mntu ze libaleke isibini kwikhamera, libale uluhlu olufanayo. Kuphela kuxa kukho umdlalo kunye nantoni na ethathiweyo phambili. Ngokwayo, oku kukhuseleko kakhulu kwizinto ezibonakalayo ekuthiwa zi positives zobuxoki. Ikwabonelela umntu ngokubambisana nomntu ngaphambi kokuba kuthathwe isigqibo malunga nokubanjwa.
Isizukulwana sokuqala se-bodycams esisebenzayo namhlanje sigxile ekurekhodeni ividiyo yeenkqubo zolawulo lobungqina. Ngoku, i-Bodycam ishenxisa ukugxila ekusasazeni ividiyo, ukuqondwa kobuso, nakwisixhobo se-Edge-AI. Esi sizukulwana silandelayo se-IoT (intanethi yezinto) ii-bodycams ziya kujoyina iibhiliyoni zezinye izixhobo ze-IoT eziza kusetyenziswa kwinethiwekhi ye-4G kunye ne-5G kule minyaka izayo. Uyilelwe ukuba uthungelwano, ukwabelana ngedatha, ukwahlulahlula phakathi komda ukuya embindini, ezi zixhobo ziya kuguquka zisuke 'kwimeko apho' ukurekhodwa kwevidiyo kusixhobo esifanelekileyo samapolisa.
Kwaye ke, ngokokusebenza kwamapolisa, kule minyaka izayo iya kuphawulwa njengendawo yokujika yokwamkelwa kobuso. Uvavanyo luya kudibana nokusasazwa. Ukuhanjiswa kuya kuvelisa iziphumo. Iingxoxo ziya kuphumelela. Uninzi loluntu, ekugqibeleni, luya kukhetha ukhuseleko lomntu kunye nokukhuseleka kwimfihlo yabucala. Ekuvukeni kweefowuni ezininzi zezithintelo kunye nommiselo, kuvavanyo olupapashwe ngaphambi kweenyanga ezithile kwafumanisa ukuba yi-18% yabantu baseMelika abakholelwa ukuba ukubonwa kobuso kufanele kuthintelwe ngokungqongqo kwinkcitho yokhuseleko loluntu. Kwaye kulapho i-bodycams iya kuza khona. Ukuba singawaqeqesha amapolisa ethu ukuba aqaphele wonke umntu owonileyo, wonke umntu onomdla ongaziwayo, wonke umntu osengozini okanye umntwana olahlekileyo, ukuya kuma-99% okanye kwinqanaba elichanekileyo lokuchaneka.
Iinzuzo zokuqondwa kobuso
Ukwanda kokhuselekoEnye yezona zinto zibalulekileyo zetekhnoloji yoqwalaselo lobuso kukuba ikhulisa ukhuseleko kunye nokhuseleko. Ukusuka kwiiarhente zikarhulumente ukuya kusetyenziso lomntu, kukho isidingo esandayo sokhuseleko oluphambili kunye neenkqubo zokujonga. Imibutho inokuchonga ngokulula kwaye ithathe nabani na oza kula maziko, kwaye ngokulula banokufaka iflegi iindwendwe ezingamkelekanga. Kunokuba luncedo kakhulu xa kufikwa ekufumaneni abanqolobi abanokubakho. Ngapha koko, akukho sitshixo, ibheji, okanye iphasiwedi ezinokubiwa okanye zilahleke.
Ikhawuleza kwaye ichanekile: Ngokonyuka kwesidingo ngesantya kunye nenani elikhulayo le-cyberattacks, ukuba netekhnoloji ekhawulezayo nechanekileyo yinto ephambili. Itekhnoloji yokuqonda ngobuso inika ukuqinisekiswa okufanelekileyo, ngokukhawuleza, nangokuchanekileyo. Nangona kunokwenzeka, kunzima kakhulu ukukhohlisa itekhnolojiyokukhumbula ubuso, eyenza ukuba ibe luncedo ekukhuseleni ubuqhetseba.
Akukho NxibelelwanoUkuqwalaselwa kobuso bakhetha ukujonga ukuskena ngomnwe ngenxa yenkqubo engekho yoqhakamshelwano. Abantu akufuneki bakhathazeke ngezinto ezinokubangela iingxaki ezinxulumene netekhnoloji yokuchonga iminwe, ezinjengeentsholongwane okanye amanqaku.
Iindleko zokuPhumeza eziPhezulu: Ukuqwalaselwa kobuso kufuna ikhamera ekumgangatho ophezulu kunye nesoftware ephezulu ukuqinisekisa ukuchaneka kunye nesantya. Nangona kunjalo, uPhando lweNtengiso yeAllies luqikelela ukuba ukuqhubela phambili kwezobuchwephesha kunokwenzeka ukuba kunciphise amaxabiso eenkqubo zobonakaliso zobuso kwikamva.
Ukugcinwa kwedathaIvidiyo kunye nemifanekiso ekumgangatho ophezulu efunekayo ukuze uqapheleke ebusweni ithatha isixa esikhulu sokugcina. Ukuze iinkqubo zokuqaphela ubuso zisebenze, zisebenza kuphela nge-10 ukuya kwi-25% yeividiyo. Oku kukhokelela kwimibutho ukuba isebenzise iikhompyuter ezininzi ukwenza yonke into kwaye kuyenze ngokukhawuleza.
Utshintsho kwinkangeleko nakwikhamera: Naluphi na utshintsho olukhulu kwinkangeleko, kubandakanya iinwele zobuso kunye notshintsho lomzimba, zinokulahla itekhnoloji. Kwezi meko, kufuneka umfanekiso omtsha. Ikona yekhamera inokubangela imiba kuba ii-angles ezininzi ziyafuneka ekuchongeni ubuso.
Okwangoku akukho mthetho ujonga ngqo kummiselo nolawulo lweenqwelo zamapolisa ezinxibe umzimba. Lo mthetho ucekeceke ngaphandle kwesantya esikhawulezayo apho kuphuhliswa khona iteknoloji, enjengeekhamera ezinxibe umzimba. Ukungabikho komthetho ofanelekileyo kudala umngcipheko wokuba ubumfihlo bomntu ngamnye busengozini ngenxa yokwamkelwa kwetekhnoloji entsha yokujonga.
Ukuqwalaselwa kobuso yitekhnoloji enamandla kodwa kufuneka isetyenziswe ngobulumko. Kwelinye icala, kuzisa inzuzo enkulu kwiinkampani nakwabasebenzisi bokugqibela, ukubanceda ukuphucula ukhuseleko lwabo kunye nokulandela umkhondo kwabo banxaxhileyo. Kwelinye icala, inokusetyenziswa gwenxa ukuze izibonelelo zobuqu kwaye ikhokelele kwezinye iziphumo ezibi. Kuya kuthatha ubuncinci iminyaka ye-5 yokuqatshelwa kobuso beze ngokuchanekileyo malunga namalungelo oluntu kunye nemfihlo yabanye.
Iikhamera ezinxitywe ngumzimba ezinokubonwa ebusweni ukuba zisetyenziswe ngokuchanekileyo kunye nokunciphisa iziphumo ezinokubakho kunye nemingcipheko kubumfihlo, kufuneka kufakwe umthetho ofanelekileyo ojongana ngqo nokusetyenziswa kwezi zixhobo. Kukho ukubakho kweekhamera ezinxibe umzimba njengesixhobo esiluncedo ekufezekiseni ukuphendula ngokufanelekileyo; Nangona kunjalo, oku kunokwenzeka kuphela ukuba umthetho olawula ubumfihlo ofanelekileyo ugunyaziswe ngumthetho.
Anon., Nd Ingxelo yoKhuseleko lweHlabathi. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: http://www.worldsecurity-index.com/shareDir/documents/15508405770.pdf
Bud, TK, nd BWVSG. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: http://www.bwvsg.com/resources/procedures-and-guidelines/
DashMagazine, nd M. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://becominghuman.ai/the-threats-and-benefits-of-facial-recognition-what-should-we-know-17008f69ae74
UDoffman, Z., nd [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/01/10/body-worn-2-0-how-iot-facial-recognition-is-set-to-change-frontline-policing/#4e0a5cad1ff3
U-Marr, B., nd Forbes [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/08/19/facial-recognition-technology-here-are-the-important-pros-and-cons/#28c79e8e14d1
Iqela, i-RM, i-2019. I-RTI. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://www.1rti.com/pros-cons-of-facial-recognition-technology/
I-Wendt, R., 30 jally 2019. UKUTHENGA NGOKHUSELEKO NOKUHLANGANISA. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://www.securitysales.com/news/facial-recognition-tech-scrutiny/
Ukwaziswa kokuqatshelwa kobuso kwiikhamera ezizezomzimba gqibela ukuguqulwa: Disemba 3rd, 2019 by admin
4530 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-6 Namhlanje